चार वाणिज्य बैंकको लाभांश घोषणा हुन बाँकी, यी हुन बुक क्लोज तय गर्ने बैंक ? « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : १५ मंसिर २०७८, बुधबार १२:३४
१५ मंसिर, काठमाडौं । नेप्सेमा सूचीकृत २६ वाणिज्य बैंकमध्येमा २३ बैंकले लाभांश घोषणा गरेका छन । अन्य तीन बैकले भने हालसम्म लाभांश घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ । हालसम्म लाभांश घोषणा गर्न बाँकी बैंक हुन् सिभिल बैंक, सेञ्चुरी बैंक र कृषी विकास बैंक ।
हालसम्मसम्म २३ बैंकले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् । ४ वटा बैंकले अझै लाभांश घोषणा गरेका छैनन् । लाभांश घोषणा गर्न बाँकी रहेका वाणिज्य बैंकमा कृषि विकास बैंक, एनसिसी बैंक, सिभिल बैंक, सेञ्चुरी बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेको छ । वाणिज्य बैंक भने नेप्सेमा सूचिकृत छैन । बैंकले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई लाभांश दिँदैन ।
सेञ्चुरी बैंकले करिब ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा गर्ने भएको छ । तर बैंकको गत आवको वितरणयोग्य नाफा हेर्दा बैंकको लाभांश दिन सक्ने क्षमता ६.५८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, कृषि विकास बैंक र सिभिल बैंकले पनि केही दिनमा लाभांश घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् ।
यी हुन् लाभांश घोषणा गरी बुक क्लमेज मिति तय गर्ने बैंक
सानिमा बैंकको सीईओमा पाण्डे नियुक्त
हिमालयन बैंकको मुनाफा १३.८० प्रतिशतले बढ्यो, ईपीएस कति ?
२७ वाणिज्य बैंकहरुको मुनाफा ३४ अर्ब २१ करोड, १६ बैंक अर्बपति क्लबमा
एनआईसी एशिया बैंकको “आईसर्भ प्लेटफर्म” के हो ? ग्राहकले कसरी लिन सक्छन लाभ ?